Ababhali beSpanish bemihla ngemihla, ezinye iipeni ezimele | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Ababhali, Iincwadi
Ababhali beSpanish bangoku baye baqaphela ukuba baninzi kakhulu. Kumashumi eminyaka akutshanje ilizwe libonile ukuzalwa kweepeni ezidumileyo eziqhubeka ukutyeba uncwadi lwazo. Ke ngoko, aba babhali banokuthathwa njengeendlalifa ezifanelekileyo zelifa elishiywe nguCervantes, uLope de Vega, uLorca, uQuevedo, uBécquer, uPérez Galdós, phakathi kwamanye amaqhawe.
Ngeentlobo ezahlukeneyo, aba babhali bathabathele kubaphulaphuli kwilizwe lonke nakwamanye amazwe. Abanye babo baye bazuza amanqaku okuhlela oosozigidi, injalo imeko kaCarlos Ruiz Zafón (1964-2020) noArturo Pérez-Reverte. Ngokufanayo, kubalulekile ukuba uqaphele umsebenzi wolutsha olunetalente njengoNacho Carretero okanye uFrancisco Javier Olmedo. Okulandelayo, uluhlu olunenxalenye yaba babhali.
1 UArturo Pérez-Reverte
2 UCarlos Ruiz Zafon
3 UNacho Carretero
4 UFernando Aramburu
5 UFrancisco Javier Olmedo Vasquez
NgoNovemba 25, 1951, isixeko saseSpain iCagagagag sabona ukuzalwa kukaArturo Pérez-Reverte Gutiérrez. Wafumana isidanga sakhe sobuntatheli kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid, ikhondo awayeziqhelanisa nalo ukusukela ngo-1973 ukuya kowe-1994. Ukugquma kwakhe okubaluleke kakhulu yayiyimfazwe yaseFalklands, imfazwe yaseBosnia kunye nokubhukuqwa eTunisia..
Nangona umsebenzi wakhe wokuqala njengombhali yaba inoveli UHussar (Ngo-1986), imisebenzi eyamnika ukuba angaziwa yayiyiyo Itheyibhile yeFlanders (1990) kunye Iklabhu yeDumas (1993). Kwiminyaka emithathu kamva wapapasha inoveli yembali UCaptain Alatriste (1996). Esi sihloko Ithengise izigidi zeekopi kwaye yayiyeyokuqala kwisaga eneencwadi ezisi-7.
Ukusukela ngo-2003, uArturo Pérez-Reverte ungoweqela labantu abanemifanekiso yeRoyal Spanish Academy (RAE), apho ahlala khona usihlalo T. Kwi-2016 wayila iwebhusayithi yeencwadi "iZenda" kwaye wazisa Falco, ufakelo lokuqala lwe-trilogy eyimpumelelo kamva yagqitywa ngo-Eva (2017) kunye neSabotage (2018). Ngo-2020 imisebenzi yakhe yamva nje ifikile: Umgca womlilo y Umqolomba wee cyclops.
NgoSeptemba 25, 1964 kwiklinikhi yaseDel Pilar e-Barcelona, ​​uCarlos Ruiz Zafón wazalwa. Izifundo zakhe zokuqala zenziwa eColegio de los Jesuitas de Sarria. Ukususela esemncinci kakhulu wabonisa umdla wakhe wokubhala; Ndenze amabali amaphepha ama-3 aphakathi kovalo kunye nemixholo yabaphambukeli. Ngeminyaka eli-15 kuphela ubudala, wagqiba incwadi yakhe yokuqala enesihloko esithi: IHarlequin Labyrinth.
Kunyaka wakhe wokuqala kwiiNzululwazi zeNgcaciso (iYunivesithi ezizimeleyo yaseBarcelona), wafumana umsebenzi kwicandelo lentengiso. Usebenze neenkampani ezaziwayo: Ogilvy, UDayax, I-Tandem / DDB kunye ne-Mc Cann yeQela leHlabathi. Iqhube amaphulo aliqela okubhengeza Volkswagen, kubandakanya leyo Golf kunye nesiqubulo sakhe esithi: "ukufika kuqala akubalulekanga, kodwa kukho umntu ekufuneka eyenzile".
Ngo-1992, uRuiz Zafón washiya ibala lentengiso ukuze azinikele ngokupheleleyo kuncwadi. Emva konyaka wakhupha inoveli yakhe yokuqala, INkosana yeMist. Esi sihloko ibonakalise ukuqala kokufunda okuhle, njengoko yayiye yaphumelela ibhaso likaEdebe. Ngapha koko, ibali lakhe laqhubeka kunye Ibhotwe lasebusuku (1994) kunye Izibane zika septemba (1995) ukugqibezela Inkungu Trilogy.
Owona msebenzi wakhe ubalaseleyo wavela ngonyaka we-2000, Isithunzi somoya. Ngolu papasho, umbhali waseSpain ufumene udidi "lweyona nto ithengiswayo", ngenxa yeekopi zakhe ezingaphezulu kwezigidi ezili-15 ezithengisiweyo. UCarlos Ruiz Zafon usweleke ngoJuni 19, 2020 kwisixeko saseLos Angeles, EUnited States, emva kokutsala nzima iminyaka emibini nomhlaza wamathumbu.
Kwi-1981, isixeko saseSpain iLa Coruña sabona ukuzalwa kukaNacho Carretero Pou. Ukusukela ebengumntwana wakhuthazeka ukuba abhale ngumakhulu wakhe. Wafunda imiboniso bhanyabhanya kwi-TAI University School of Arts. Kamva, Waqala umsebenzi wakhe wobuntatheli kwiRadio Coruña, eCadena SER. Ngaxeshanye, wasebenza njengomhleli kwiimagazini Beka phantsi, Xl ngeveki, UOrsai y Intoni!, phakathi kwezinye. Wayeyinxalenye yephephandaba El Mundo.
Kuwo wonke umsebenzi wakhe wobuntatheli wenze iingxelo ezinomdla kwinqanaba lamazwe aphesheya. Phakathi kwabo, ukubulawa kwabantu eRwanda, intsholongwane ye-Ebola e-Afrika, ukuthutyeleziswa kweziyobisi eGalicia kunye nemfazwe yamakhaya eSyria. Ngo-2015 wakhupha incwadi yakhe yokuqala: UFarina, ethe yazibeka ngokukhawuleza njengenombolo 1 kwintengiso. Emva kwexesha umsebenzi wahlengahlengiswa kuthotho lweTV ngu Netflix, apho ikonwabele abaphulaphuli abaninzi.
Omnye wemisebenzi ebalaseleyo kaNacho Carretero ngu Kumgca wokufa (2018), esekwe kwimpikiswano kaPablo Ibar. (Kunyaka omnye kamva I-Movistar Plus Ndidlala uthotho lwamagama). Kwi-2018 wazisa Kubonakala kungcono kuthi, isicatshulwa esinovakalelo kakhulu malunga nembali yeqela lebhola ekhatywayo iDeportivo La Coruña. Ekugqibeleni, ngo-2019 umdlalo wakhululwa UFarina, kunye nohambo oluyimpumelelo lweGalicia.
UFernando Aramburu Irigoyen wazalwa ngo-1959 kwisixeko saseSan Sebastián (ikomkhulu lephondo laseGuipúzcoa), ilizwe laseBasque. Ngo-1983 wafumana isidanga kwi-Hispanic Philology kwiDyunivesithi yaseZaragoza. Ngexesha lobutsha bakhe wayengowabasunguli beqela le-CLOC, amava awabonakalisa kwinoveli yakhe yokuqala: Imililo yelamuni (1996), ophumelele iBhaso likaRamón Gómez de la Serna.
Ngo-1985 wafudukela eJamani, apho waqala wazinikezela ekufundiseni izifundo zeSpanish kwizalamane zabaphambukeli. Kamva, thaca incwadi yokuqala ye I-Antibula Trilogy, Amehlo angenanto (2000). Esi sihloko saqhubeka Ixilongo lase-Utopia (2003) kunye Bami akukho sithunzi (2005). Ngo-2009 wayeka ukufundisa ukujongana noncwadi kuphela.
Namhlanje, uFernando Aramburu ngumbhali owaziwayo, umbhali wenoveli, imbongi kunye nesincoko.. Phakathi kwezona mibhalo zakhe zaziwayo zezi Iintlanzi ezikrakra (2006) - ophumeleleyo kwiBhaso leRAE, phakathi kolwamkelo oluninzi olubalulekileyo- kunye patria (2016). Le noveli yokugqibela yayifanele umvuzo weLizwe woNcwadi
UFrancisco Javier Olmedo Vasquez
Umbhali waseCordoba owazalwa ngo-1980, Okwangoku ungomnye wabameli abaphambili kuhlobo lweentsomi kunye nolwenzululwazi. Ukususela esemncinci kakhulu wabonisa ukucinga kwakhe okungaqhelekanga, ngamanye amaxesha kunye neengqungquthela ezimnyama kunye ezingenangqondo. Ngaphandle komdla wakhe kuncwadi, ngo-1998 wagqiba kwelokuba afunde i-Computer Engineering, engazi ukuba oku kungabutshintsha ngonaphakade ubomi bakhe.
Ukusukela ngeveki yakhe yokuqala yeeklasi "wadibana" (ngomhlobo) uHoward Phillips Lovecraft, yenye yezona zinto zibalaseleyo zokukoyikisa. Amabali ombhali waseMelika amnceda uOlmedo ukuba akhokele kuzo zonke ezo ngcinga zazivaleleke kwingcinga zakhe ukususela ebuntwaneni. Kwi-2016, wawonga "umcebisi" wakhe kwincwadi yakhe yokuqala, Iindwendwe zehlabathi ezilityelweyo.
Phakathi kwemisebenzi edume kakhulu ka-Olmedo Vásquez yile: Phantsi kweenyawo zethu (2017) kunye Inja (2019). Bobabini baphumelele iBhaso leForolibro (eyona inoveli kuhlelo lowe-2018 nowama-2020 ngokwahlukeneyo). Ezona zithuba zakhe zamva nje Abantwana benkungu (2019) kunye Umpostile wesine (2020).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » I-Biography » Ababhali beSpanish
URafael López Umgangatho sitsho
E-Spain, ngaba abasetyhini ababhalanga okwangoku? Ukubulisa
Phendula kuRafael López Flores
UHarry Hole. Abafundi bagqabaza ngomntu kaJo Nesbø